Soyaalka Lacagta | Maankaab.com
26th February 2018 | Published by: maankaab
Mahadinta Eebbe ayaan ku furanayaa, galladdiisa nagu nooleeyay, garaadka iyo agabka kale ee aqoonta lagu kasbado, lagu na weeleeyona hiba ahaanta noo siiyaya. Nebi Muxamed na nabadqab iyo meeqaamkii sare ayaan Rabbiga uga tuugayaa, wehelkiisa in uu naga yeelo na waan wayddiisanaynaa.
Xaqiiqadaa isaga oo ka dabqaadanaya ayuu Xasan bin Muxamad An-nisabuuri, marka uu sharraxayo aayadda 14 aad ee suuradda Al-Cimraan waxa uu qorayaa “Dahabka iyo Qalinku (lacagtii milaygaa la adeegsanayay) waa halbeeg qiimeedka shay kasta, qofkii mulkiyaana waxa uu la mid yahay qof shay walba mulkiyayay”.
Dhaqaale yahan Arthur Lewis ayaa isna kitaabkiisa –theory of economic growth- ku yidhi, hadal nuxurkiisu u dhignaa “daah ka faydka lacagtu waxa uu ahaa guul wayn oo aadamuhu gaadhay, taas oo aan sinaba uga muhimad yarayn, ikhtiracii xuruufta alif-beetada iyo heliddii farsamooyinka dab dhalinta…”
Muranbadan ayaa hadheeya qeexidda erayga “lacag”. Inta badan se laba hilin ayaa mid kood la maraa si loo qeexo; in qeexitaanka lagu saleeyo shaqada ay lacagtu qabato –waana ka loo badan yahay- iyo in qeexitaanka lagu saleeyo walaxda lacagtu ka samaysanatahay. habka hore ayaa aynu qaadanaynaa, waxa na uu odhanayaa sidana, ‘Lacagtu waa wiciyad dadka u kala wareejisa badeecadaha iyo adeegyada ay is waydaarsanayaan, isla jeerkaana ah beegaal qiimeedka walxaha la kala gadanayo, welibna bulshadu is la wada ogashahay ee aan daraf ka mid ahi dafirsanayn’.
Is waydaarsiga ‘kala beddelashada’ oo qaarna ugu yeedhaan “Iiddoori” waa nidaam qofku dheeraadka wax-soo-saarkiisa uu ku doorsanayo qof kale wax-soo-saarkiisa inta ku saayidka ah ee baahidiisa ka baxsan. Haddii aynu tusaalaynno, qof raacato ah oo riyaha dhaqdaa si uu u helo dhar uu dhaxanta ka huwado waxa uu ku qasbanaa inuu qayb ka mid ah ahminkiisa/daabaxiisa dhartolaha maryo kaga beddesho. Sidaa oo kale kabatole marka uu u baahdo maacuun uu wax ku cuno ama ku cabbo waa in uu baadigoobaa weel-qore ay ‘kab iyo koob iwm’ is dhaafsadaan.
La’aanta rabitaan talantaalli ah (laba jihoole ah): waxa aad u adkayd rabitaanada dadku inay is daboolaan. Oo metelan, qof ayaa haya badeecadda “B” waxana uu doonayaa inuu ku beddesho badeecadda “R”. haddaba waxa adkayd inuu sahal ku helo qof haya Badeecadda “R” oo doonaya inuu ku beddesho badeecadda “B”. haddii aynu si kale u tusaalaynoo, Xaddiyo waxa ay haysataa kolay kalluun ah, waxana ay raadinaysaa qof haya hadhuudh oo isla markaana doonaya inuu kalluun ku doorsado hadhuudhkiisa/eeda.
Qaybsan darro: ma jirin sirsir waxyaabaha yaryar loo heli karayay; tusaale ahaan, qof hantidiisuba tahay ‘geel’ ayaa u baahday ‘waran’ uu dhawrta iskaga jiro. Illeen ma jirto lacag dhexdooda ka adeegaysaaye waa in uu tulud geeliisa ka mid ah mulkiyaddeeda ku wareejiyo Warantumaha. Saa tulud wax ka yarba waanu hayne.
Kaydgal xumo: waaqacu waxa uu ina barayaa dadku in aanay u noolayn maantadooda oo keliya, balse ay ku werwersanyihiin berritadooda. Sidaa darteed waxa ku abuuran dabci faraya in ay dheeraadka wax-soo-saarkooda kaydsiyaan si ay uga gaashaantaan dhibaatooyinka la saadaalin karo iyo kuwa kedis ku iman kara ba, -mustaqbalka dhaw iyo ka dheerba. Taasina may suurogal ahayn waagaa. Maxaayeelay badeecadaha badan koodu ma kayd geli karaan muddo dheer, xataa muddada gaaban ayaaba ay kaydintoodu kharash badantahay.
Isu dheellitir la’aan qiimeed: badeecadaha iyo adeegyadu ma ay lahayn beegaal qiimeed sugan. Saamigal qiimeedk walxaha la is waydaarsanayona waxa jaan goyn jiray hadba sida loogu kala haarisanyahay ( loogu kala baahibadanyahay). Taa macnaheedu waxa weeye, kolba qofka baahida darani dabada ka riixayso ayaa bedeecadda uu isagu wareejinayo laga bursanayay.
Badeecad “B” ayaa la isku afgartay inay noqoto walaxda bulshda ku dhex wareegaysa ee noqonaysa lacag. Degaanada kala duwani waxa ay isticmaalyeen lacag-badeecadeedyo kala duwan. Degaanada qaar milixda ayaa ay ka dhigteen lacag, qaar hargaha ayaa ay ka dhigteen, qaar timirta ayaa ay ka dhigteen, -qoloba wixii agtooda qaddarin ku lahaa ayaa ay ka dhigatay.
Marxaladdan intii lagu gudajiray ayaa loo malaynayaa in dawladuhuna faro-gelintoodii koobaad ku sameeyeen amuuraha lacagta. Dhawr boqol oo gu’ ka hor dhalashdii nebi Ciise cs, ayaa la werinayaa in boqortooyadii Lydia (Turkiga) ay hal-abuurtay qaddaaddicii ugu horraysay (lacag-macdaneed qaab goob ah u samaysan) . kadib, farsamadaa qaddaadiicdu waxay ku faaftay dunida oo dhan, oo dawldo badan ayaa farsameeyay qaddaadiic leh xaradh-godeedyo iyo masawirro ka turjumaya sawracooda (identity). Lakiin warka wanaagsani waxa uu ahaa, in qaddaadiicda ay samaysatay dawlad gaar ahi aan adeegsigeedu ku koobnayn geyiga dawladdaasi/boqortooyadaasi ka taliso oo qudha, balse dunida oo dhan laga adeegsanjiray, maaddaama oo ay ka samaysantahay walax caqiibo leh (Dahab, Qalin, balaatiin, iwm). Waxa keliya ee tixgelinta la siinayay waxa uu ahaa culayska iyo heerka saaafinida oo qudha.
Lacagta qiimeheedu qudh-dheeda ayuu ku samaysnaa, mana ahayn qiime dusha laga ga keenay oo qaanuunku u yeelay. Lacagta ka samaysan “waraaqad” qudh ahaan qiime u ma laha. Xaashi yar oo la sibbaaqay ma qiime ayay yeelan lahayd, haddii aan qaanuun arintaa qasbayaa jiri lahayn?? Lacag macadaneedka arrinkiisu waa uu ka duwan yahay oo rodol dahab ah marka aad wax ku gadanayso qudh ahaanteeda ayay qiime u leedahay, maadaama oo tahay qurub dahab ah.
Dhagxaanta macdanta ahi si suququl (Scarce) ah ayay u jiraan, sidaa darteed waxa ay haystaan awood wax iibineed oo aad u sarraysa. Ku darso oo sicir bararka na ma saaciddo oo lacag markii la doono intii la ddoono laga daabacan karo ma aha.
Lacag-macdaneedka samaynteeda si shakhsi ah loogama faaiidaysan karo, halka lacag qaanuuneedka abuuriddeeda dad gaar ahi ku danaysan karo. Ujeedka aan qodobkan uga socdaa waxa weeye , dad aan abidkoodba hal caanamaal oo qudha xataa xoogsi tegin ayaa abuuridda lacag qaanuuneedka ka kasban kara xoolo aan la xisaabin karin! Sababtu na waa, lacag kasta oo la abuuro waxa laga helaa faa’iido la yidhaahdo ‘Seigniorage/رسوم سك العملات’. Faa’iidadani waxa ay ka soo dhex baxdaa; faraqa u dhexeeya kharashka ku baxay samaynta 1 yunid oo lacag ah oo laga jaray awoodda wax iibineed ee 1 kaa yunid.
Culimadaa waxa ka mid ah Sh. Cimraan xusayn –u dhashay tiriinidhaadh iyo Tubaygo-, Sh.Cabdulqaaddir A Suufi, asaasaha ururka Maraabiduun, Mahatir Muxamed –Rasiil wasaarihii hore ee Malaysia ikk oo badan.
Qarnigii 16 aad ayaa waxa qaaradda Yurub ka bilaabmay bangiyada. Baahida keentahay inay abuurmaan waxa lagu sheegaa “cabsi” ganacsatada soohdimaha isaga gudba ka soo wajahday dhuljiifyo ku mooryaanoobay lacag-macdaneedkaa kolba dhan loo walwaalayo.
Heshiiskana Maxdaxwayne Nixon ayaa buriyay si uu dawldda maraykanka u hodmiyo oo ay u helaan awood bilaash ah oo wax kasta oo ay doonaan u jarta. Intaa wixii ka dambeeyayna lacagaha dunida oo dhami waxa ay isu beddeleen, lacago aan qudh ahaan qiime u lahayn se qaanuunku u yeelay. Lacag qaanuuneedku waxa ay u jirtaa qaab xaashiyo xardhanah oo midabbo iyo masawirro lagu aslay ama tirooyin mishiinno dhex qulqulaya oo aan xitaa ahayn wax la taaban karo ba.
النقود في الاقتصاد الاسلامي, د.رفيق يونس
تاريخ النقود الإسلامية – موسى الحسيني المازندراني